Inona no raketin'ny Boky Comic?
Ny tranon'ny horonan-tsarimihetsika dia tsy ny karazana tontonana hita ao amin'ny Comic-Con , tamin'ny voalohany no niantsoana ny sary sokitra tsirairay izay mamorona pejy tokana ao anaty boky mampihomehy.
A "tontonana" ao amin'ny boky mampihomehy ao amin'ny pejy iray amin'ny boky comic. Amin'ny ankapobeny dia misy pejin'ny boky mampihomehy izay ahitana olona maromaro izay, rehefa tafangona, dia tantarao tantara iray mandamina.
Ny fomba iray hijerena ny tontonana dia toy ny seho amin'ny sarimihetsika na fahitalavitra.
Ny sariitatra mampihomehy dia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny sehatra handefasana ny fampahalalam-baovao betsaka indrindra. Ny endritsoratra amin'ny endriky ny baolina sy ny teny fampiasa dia ampiasaina mba hamitana ilay tantara.
Firy ny takelaka eo amin'ny pejy?
Amin'ny ankapobeny, ny isa maromaro misy takelaka ho an'ny pejy fanoratana dia dimy ka hatramin'ny enina. Na izany aza, ny mpihira tantara an-tsarimihetsika dia afaka milalao miaraka amin'ny endrika pejy mba hamporisihana ny fihetseham-po samihafa. Ohatra, pejy iray tokana dia mety ahitana sehatra iray miavaka sy mahavariana na azo atao amin'ny takelaka kely maromaro mba hanampiana manondro ny fandehan'ny fotoana na haneho fanehoan-javatra maromaro amin'ny hetsika iray. Ohatra, ao amin'ny Master Race , i Bernie Krigstein dia mampiasa sehatra maromaro sy kely kokoa mba hampihenana ny fotoana ho fiantraikany goavana. Ny filalaovana ny habeny sy ny fametrahana ireo piraofilina dia mety hahatonga fahanginana sy tantara mampihetsim-po - izay maneho izay mety ho sehatra tsotra hilazana ny fihetseham-pon'ny mpamaky.
Ao amin'ny sariitatra Amerikana, dia vakiana avy any ankavia miankavanana ny pejy, fa ny mifanohitra kosa dia ho an'ny manga .
Amin'ny ankapobeny dia mazava fa misy ny mamaky ilay lahatsoratra ary mijery ny sary, mandehandeha araka ny laharan-tarehimarika, toy ny hoe mandeha tsikelikely amin'ny tsipika ao anaty boky. Na dia izany aza, misy mpilalao tantara an-tsarimihetsika sasany dia milalao amin'ny endriky ny pejy sy ny fametrahana teny bubbles sy boaty an-tsoratra. Ao amin'ny Promethea an'i Alan Moore , ohatra, mpanakanto JH
Ny Williams III dia manalavitra ilay rafitra fanehoana an-tsarety enina misy tsindrim-peo ho an'ny tsanganana roa tapitrisa pejy mba hamoronana izao tontolo izao mahatalanjona sy mahafinaritra kokoa.
Ny filalaovana ny pejin'ny comic, ny habeny sy ny fametrahana ny takelaka, ny habeny sy ny endri-tsoratra, dia vitsivitsy monja amin'ireo mpilalao sarimihetsika comic dia afaka mampitombo ny asa sy manamboatra fomba fanoratana.
Inona avy ny Comic Back Issue?
Ny fomba hahatongavana ho mpilalao sarimihetsika
20 Comic Book Events Ny mpankafy rehetra dia tokony ho vakiana
Mamelà Amim-pitiavana amin'ny Boky Comic
Sappho any Lesbos
Fampakaram-bidy amin'ny fananganana Manga Head amin'ny 3/4 View
Ady An-trano Amerikanina: Jeneraly Jeneraly Irvin McDowell
Manaova fitrandrahana solika amin'ny alàlan'ny fako ala (WVO) Fizarana 1
3 karazana ranom-boankazo (marin-dranomasina)
Ady Lehibe I: American Ace Eddie Rickenbacker
Fantaro ireo anarana ho an'ny vatan-drano
Fantaro ny fomba hahazoana ratra iray amin'ny fifaninanana amin'ny IDP Fantasy Football
Ny 10 Yamas & Niyamas of Hinduism
Ahoana ny fomba fanatanterahana ny fihetsiketseham-panoheram-bozaka manga
Ny tantaran'i Elvis: 1955
"Analysis" ny karazana "Ghosts" - Ramatoa Helene Alving
Ahoana ny fomba handaminana Miles to Kilometatra - mi-kilometatra ohatra ohatra
Boky 5 ho an'ny ankizy momba ny zaza momba ireo mpanakanto malaza
Fomba hanatsarana ny valin'ny ACT
7 Miantsoantso eny amin'ny làlan-kaleha ny mpianatra
Tantara mikasika ny Basketball any Amerika
Ny kanseran'ny Chytrida sy ny fanimbana
"Mivoaka" Teny sy Fiteny
Mahatsiaro ny 9/11 miaraka amin'ny Memorial Songs
Ny ady tany Vietnam (Sary Amerikana) amin'ny sary
Ireo endri-tsoratra dimy ratsy indrindra amin'ny fanafihana ny Titan Anime
Fampitahana sy mifanohitra amin'ny Grika fahiny sy Roma fahiny